Fumana '404 - Ayifumaneki' xa uzama ukulanda
kubalulekile Fumana '404 - Ayifumaneki' xa uzama ukulanda
iinyanga 11 6 iintsuku ezidlulileyo #932 by MTR1768
Ndizama ukulanda i-freeware kwi:
Xa ndibetha iqhosha lokukhupha owazama ukufika apha:
kwaye ndifumana '404 - Ayifumanekanga'.
Ndingayenza ntoni ukukhuphela?
iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo #933 by DRCW
Iphutha le-404 linokuba nezizathu ezininzi. Unokuba neengxaki kumncedisi wakho okanye uRioooo wayesebenza ngeyabo. Unokuthi unxibelelwano olude. Unokuba ne-malware echaphazelekayo. Ndicebisa ukuqhuba i-malwarebytes. Kukhutshwa mahala kwaye ufumana ii-15 iintsuku zeenkonzo ezipheleleyo zamahhala. Ndiyisebenzise iminyaka eyi-4, kwaye akukho nto ingena kuyo. Emva kokuba uqhuba ukukhangela, zama uzame ukukhuphela kwakhona indawo.
Ixesha ukwenza page: 0.099 imizuzwana